ကျွန်မတို့အားလုံးဟာ ကုန်ပစ္စည်း(ဒါမှမဟုတ်) ဝန်ဆောင်မှုတွေကို ရောင်းချခြင်း၊ ဝယ်ယူခြင်း၊ သုံးစွဲခြင်း ကိစ္စရပ်တွေနဲ့ ပတ်သက်ဆက်နွယ်နေပြီးတော့ ကိုယ် ကိုယ်တိုင်ဟာလည်း အချိန်တိုင်းမှာ ရောင်းသူလည်းဖြစ်သွားတတ်သလို၊ ဝယ်သူသုံးစွဲသူလည်းဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ အများစုကတော့ ဝယ်ယူ သုံးစွဲသူတွေအကြောင်းကို နားလည်သလိုနဲ့ ရောင်းချနေတတ်ကြတာပါပဲ။ အခုနောက်ပိုင်းမှာ အရောင်းပိုင်းကလူတွေ၊ ဈေးကွက်ရှာဖွေသူတွေနဲ့ လုပ်ငန်းရှင်အားလုံးဟာ Customers တွေရဲ့ Buying Behaviour, Buying Process အကြောင်းတွေကို ပညာရပ်တစ်ခုပုံစံ အသေးစိတ် သင်ကြားလေ့လာလိုက်စားလာကြပြီး Customers’ Trends များကိုစောင့်ကြည့်ခြင်း၊ Customers တွေရဲ့ အသက်ကာလအပိုင်းအခြား၊ နေရာဒေသ၊ ဝင်ငွေ စတဲ့အချက်များနှင့် Customers တွေအပေါ်လွှမ်းမိုးတဲ့ လူပုဂ္ဂိုလ် / အကြောင်းအရာတို့ကို Database လုပ်ပြီး Online, Offline ကြော်ငြာခြင်း၊ Promotion Plan များဆွဲခြင်း၊ Product Development ဖန်တီးခြင်းတို့ ပြုလုပ်လာကြပါပြီ။
ဒါပေမယ့် Customers တွေရဲ့ အမူအကျင့်တွေဟာ ပုံသေမရှိပဲ အနီးအနားက အကြောင်းအရာတွေလွှမ်းမိုးလှုံ့ဆော်မှုတွေကြောင့် အမြဲ ပြောင်းလဲနေတာဖြစ်လို့ မရောင်းခင် ဝယ်မယ့်သူတွေက ဘယ်သူတွေလဲ၊ သူတို့ရဲ့ အမူအကျင့်တွေနဲ့ Trends တွေကို အမြဲမျက်ခြေမပျက်ဖို့လိုပါတယ်။
Sales & Marketing Management နဲ့ Business Management ပညာရပ်တွေထဲမှာပါတဲ့ Customers တွေအကြောင်းကို လေ့လာကြည့်ကြပါစို့။
ကုန်ပစ္စည်းဝယ်ယူသူတွေကို ဖောက်သည် Customers လို့ခေါ်ပြီး ဝန်ဆောင်မှုဝယ်ယူသူတွေကိုတော့ Clients လို့ခေါ်ပါတယ်။ ဝယ်ယူလိုက်တဲ့ Products or Service သုံးစွဲသူ ( End Users ) တွေကိုတော့ Consumers စားသုံးသူတွေလို့ခေါ်ပါတယ်။ ( ဒီနေရာမှာ တစ်ခုမှတ်သားရန်မှာ ဝယ်ယူသူတိုင်းဟာ Consumers တွေမဟုတ်ကြပါဘူး။ ဥပမာ ကြောင်လေးတွေအတွက် ကြောင်စာဝယ်တယ်၊ ဝယ်သူတွေဟာ Customers တွေဖြစ်ပြီးတော့ စားသုံးတဲ့ Consumers တွေကတော့ ကြောင်လေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ သို့ပေမယ့် ဝယ်ယူခြင်း Purchase ဖြစ်ဖို့က End Users တွေပေါ်မှာပဲ မူတည်တယ်ဆိုတာပါပဲ။)
ကျွန်မတို့တွေ ဘယ်ပစ္စည်းမဆိုဝယ်ယူသုံးစွဲကြတဲ့နေရာမှာ သတိမထားမိတဲ့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ Psychological လွှမ်းမိုးမှုများနဲ့ ဝယ်ယူပုံ အဆင့်ဆင့် Buying Process ဆိုတာရှိပါတယ်။ Buying Process ကို သဘာဝကျကျစဉ်းစားကြည့်တဲ့အခါ
ကြော်ငြာတစ်ခုကိုတွေ့မယ် --> လိုချင်လိုက်တာ --> ဘယ်သူတွေဘာပြောထားလဲဆိုတဲ့ Reviews, comments တွေရှာကြည့်ဦးမယ် / အပြင်မှာခင်းကျင်းပြထားတာဆို Packing ကိုဖတ်ကြည့်မယ်၊ အစမ်းပြထားတာရှိရင် Trial လုပ်ကြည့်မယ်။ --> ခုဝယ်မယ်/ နောက်မှဝယ်မယ် ဆိုတဲ့အဆင့်တွေပါ,ပါမယ်။
5) Post Purchase Evaluation ဆိုပြီး အဆင့် ၅ဆင့်ဖော်ပြထားပါတယ်။
Customers’ Buying Journey ကို သိပြီဆိုတော့ အဲ့ဒီကနေ ကိုယ့် Products ကို ဝယ်အောင် ဘယ်လိုဖန်တီးကြမလဲ??
1) Need Recognition (လိုအပ်ချက်ကို သတိပြုမိခြင်း)
သုံးစွဲသူ / ဝယ်ယူသူတွေအား ကိုယ့်ရဲ့ ကုန်ပစ္စည်းကို လိုအပ်တယ်၊ ဝယ်သင့်တယ်လို့သိရှိလာအောင်ပြုလုပ်ခြင်းပါ။
ဝယ်သူတွေဟာ ကြော်ငြာကိုတွေ့ပြီး လိုချင်လို့ဝယ်ယူကြတာရှိသလို၊ သူတို့မှာရှိတဲ့အရာက အဆင်မပြေလို့ တခြားဟာ ပြောင်းသုံးဖို့ လိုအပ်လာတာမျိုးတွေရှိတတ်တာကြောင့်
- ကိုယ့်လို Product Type ကနေ ဖြစ်တတ်တဲ့ Error မျိုး၊ ဝယ်သူတွေကြုံရတတ်တဲ့အခက်အခဲမျိုး၊
Competitors တွေရဲ့ Weakness စတဲ့ Problems တွေကို အမြဲနားစွင့်ပြီး ကိုယ့်ရဲ့ Brand က ပေးနိုင်တဲ့ Taste or Functions တွေဟာ Solution ဖြစ်စေနိုင်တယ်ဆိုတာကိုသိရှိအောင် လုပ်ရပါမယ်။
- Trends ပိုင်းကိုလည်း မျက်ခြေမပျက်စေပဲ Brand နဲ့အကိုက်ညီဆုံးအချိန်တွေမှာ Online ကနေ Ad လွှတ်ဖို့၊
- Offline တွေမှာဆိုရင်လည်း Payday Date ဝန်းကျင်မျိုး၊ အခါကြီးရက်ကြီးများ၊ Seasonal Period စတဲ့ ကာလမျိုးတွေမှာ Promotion Event တွေ ပြုလုပ်သင့်ပါတယ်။
ဒါကြောင့်လည်း ကုမ္ပဏီကြီးတွေဟာ Marketing Budget ကို သေချာသုံးပြီး ကျွန်မတို့ရဲ့မသိစိတ်ထဲမှာ နေရာယူနိုင်အောင် နေရာတိုင်း၊ ပတ်ဝန်းကျင်တိုင်းမှာ မြင်လွယ်တဲ့ ကြော်ငြာပုံစံမျိုးစုံ ဖန်တီးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ မြင်သာအောင်ပြောရရင် - Billboard ad, Bus Tv ad နဲ့ taxi ကိုယ်ထည်တွေမှာ Sticker ကပ်တာမျိုး.. ဒါက အရင်ပုံမှန်ကြော်ငြာထည့်ကြတဲ့ပုံစံတွေပါ။
ယခုဆိုရင်တော့ ဖုန်းအသုံးပြုမှုများခြင်းနဲ့ Social Media တွေမှာ ကိုယ့် Brand Customers တွေရှိကြတာကြောင့် Audience များတဲ့ News Page, Cele Page, Memes, Movies or Series တွေမှာ ကြော်ငြာထည့်ခြင်း၊ Influencers များကိုအသုံးပြုတဲ့ ad ၊ Influencers’ reviews စတဲ့ ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ Awareness & Interest ရအောင် ကြော်ငြာတွေဖန်တီးနေကြပါပြီ။
လိုအပ်လာပြီလို့သိတဲ့အခါမှာ ဘယ် Brand ကောင်းမလဲဆိုတာကို Online ကနေ ရှာတာမျိုး၊ ကိုယ့်အနီးအနားက မိတ်ဆွေ သူငယ်ချင်းတွေဆီက စုံစမ်းတဲ့အဆင့်ဖြစ်ပါတယ်။
အဲ့ဒီတော့ ကိုယ့် Brand ဟာ Searching List မှာပါဝင်နေဖို့၊ သူများကို တစ်ဆင့်ပြန်လည် ညွှန်းနိုင်မယ့် Brand ဖြစ်အောင် တည်ဆောက်ထားဖို့လိုပါတယ်။
- Online မှာဆိုရင် Customers တွေအများဆုံးရှိမယ့် Social Platform တွေမှာ ပစ္စည်းကိုကြော်ငြာတင်ရုံတင်မဟုတ်ပဲ စက်ပစ္စည်းဆို လက်တွေ့ Function သရုပ်ဖော်တင်ပြတဲ့ Video Clip မျိုး၊ အစားအသောက်ဆိုရင်လည်း ဘယ်လိုအစားအစာတွေကိုပါ တွဲဖက်ဖန်တီးလို့ရတယ်ဆိုတဲ့ Knowledge Content တွေနဲ့ Display လုပ်ထားပါ။ Reviews တွေ၊ Good Comments & Feedback တွေအတွက် Appreciate လုပ်တာမျိုး၊ Bad Comments နဲ့ အခြား Conflicts တွေအတွက် အကောင်းဆုံးတုံ့ပြန်ဖြေရှင်းချက်တွေကိုလည်း ပေါ်လွင်အောင်လုပ်ပြီး အကောင်းဆုံး Public Relation ပုံစံ / User Friendly အဖြစ်မြင်အောင် Image ကို တည်ဆောက်ထားရပါမယ်။
- Offline မှာဆိုရင် ကိုယ့် Product ကို တစ်ခါဝယ်ယူဖူးထားတဲ့သူတွေကနေ သူ့တို့ပတ်ဝန်းကျင်ကလူတွေအား ကိုယ့် Brand အကြောင်း Word-of-Mouth ဖြစ်ဖို့ လုပ်ဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအတွက် အကောင်းဆုံး Service ဖြစ်အောင် Personal Selling ပိုင်းအတွက် Sale Staff များကို ကျွမ်းကျင်အောင် Train ထားခြင်း၊ မဝယ်ခင် လေ့လာနိုင်အောင်သော်လည်းကောင်း/စမ်းသပ်ကြည့်နိုင်အောင်သော်လည်းကောင်း Trial များ ပြင်ဆင်ပေးခြင်းတို့ လုပ်ဆောင်ပါ။
Customers များက ရွေးချယ်စရာများထဲမှ အသင့်တော်ဆုံး/အကောင်းဆုံးဖြစ်မယ့်ဟာကို စဉ်းစားအကဲဖြတ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
ဝယ်ယူသူတွေ ဒီလိုဝယ်ယူဖို့စဉ်းစားဆုံးဖြတ်တဲ့အခါမှာ အောက်ပါအချက်တွေကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားကြပါတယ်။
Convenience ဖြစ်၊မဖြစ် (သွားဝယ်ရလွယ်ကူခြင်း၊ မှာယူရလွယ်ကူခြင်း၊ အလွယ်တကူရရှိနိုင်ခြင်း)
Price & Perspective Value
ကိုယ်အပါအဝင် ဝယ်ယူသူအားလုံးဟာ ဈေးနှုန်းနဲ့ပတ်သက်ရင် Sensitive ဖြစ်ကြတာပါပဲ။ မဝယ်ခင်မှာ ပစ္စည်းက ပြောထားတဲ့ Price နဲ့တန်၊ မတန် လေ့လာအကဲဖြတ်တတ်ကြပါတယ်။ ဒါကို Perspective Value (ကိုယ်ကသတ်မှတ်ထားတာမဟုတ်ပဲ အခြားသူများမှ မှတ်ယူထားသော တန်ဖိုး) လို့ခေါ်ပါတယ်။ ဝယ်သူတွေဟာ ဈေးများလွန်းတယ်လို့ယူဆရင် မဝယ်ဖြစ်တတ်သလို၊ ဈေးနည်းလွန်းရင်လည်း Brand အပေါ်မှာသံသယဝင်တတ်လို့ တည်ငြိမ်ပြီး ထိုက်တန်တဲ့ဈေးနှုန်းကို သတ်မှတ်သင့်ပါတယ်။
ဝယ်ယူသူတွေဟာ အသုံးပြုရလွယ်ကူတာမျိုး၊ ဆန်းသစ်တဲ့ နည်းပညာ၊ ဖန်တီးမှုပုံစံအသစ်ရဲ့ အတွေ့အကြုံတွေကိုလည်း လိုချင်ကြပါတယ်။
သာဓကအနေနဲ့ဆိုရင် Visa Card နဲ့ ပြည်တွင်းပြည်ပကဆိုင်တွေမှာ ဈေးဝယ်နိုင်တာမျိုး၊ ဖုန်းကို လက်ဗွေရာနဲ့ ဖွင့်တာမျိုး၊ အခြား Auto System မျိုးတွေကို နှစ်သက်ကြပါတယ်။
ဒါကြောင့် တခြား Brand တွေနဲ့ ယှဉ်ပြီး စဉ်းစားတွက်ချက်တဲ့အခါမှာ ကိုယ့် Brand က သာနေဖို့ Users Expectation တွေကို လေ့လာတွက်ချက်တတ်ရပါမယ်။
အပေါ်ကအဆင့်ဆင့်ကို စဉ်းစားပြီးပြီဆိုရင်တော့ အဆင်ပြေဆုံးလို့ သတ်မှတ်တဲ့ Brand ကိုဝယ်ယူဖို့ ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်ပါတယ်။
ဒီအဆင့်မှာတော့ မိမိဝယ်ယူထားတဲ့ ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး ပြန်လည် ဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ကြပါတယ်။ ကိုယ်ထင်ထား၊ မျှော်မှန်းထားသလို တကယ်ပဲကောင်းရဲ့လား၊ ပေးရတဲ့ ဈေးနှုန်းနဲ့ရောတန်ရဲ့လား စသည်ဖြင့် တွက်ချက်ပြီး နောက်တစ်ခါဆိုရင်တော့ မဝယ်တော့ဘူးတို့၊ နောက်ဆို ဒါပဲ သုံးမယ်တို့ အမျိုးမျိုးသုံးသပ်ကြတဲ့အချိန်ပါပဲ။
ဒီလိုအချိန်မျိုးမှာ ဝယ်သူက စိတ်ကျေနပ်ရင် Next Time Purchase နဲ့ အခြားသူတွေကို Good Reviews တွေပေးနိုင်သလို၊ ဝယ်သူက Satisfy မဖြစ်ဘူးဆိုရင်တော့ တစ်ဆင့်စကားတစ်ဆင့်ကြောင့် အရောင်းကျပြီး Image ထိခိုက်နိုင်တာကြောင့် Customer Feedback ကို ပြန်လည်တောင်းခံဖို့လိုပါတယ်။ အဲ့ဒီနောက် အကောင်းဆုံးပုံစံနဲ့ ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းတတ်ဖို့လိုပါတယ်။ အခုလို ပျံ့နှံ့လွယ်တဲ့ကာလတွေမှာ Responds တွေဟာ ထိလွယ်၊ရှလွယ်လို့ ဝန်ထမ်းတွေကို သေချာလေ့ကျင့်ပေးထားဖို့ အမှန်လိုအပ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် Customer Orientation ခေတ်မှာ ဝယ်ယူသူတွေကို အမှန်တကယ်ဂရုစိုက်တတ်ဖို့လိုပါတယ်။ အဲ့ဒီအတွက်လည်း Customers တွေရဲ့ စိတ်သဘောထား၊ အတွေးတွေကိုနားလည်အောင်၊ ကိုယ့် Brand ဆီကနေ သူတို့မျှော်လင့်တဲ့ Quality နဲ့ Product အသစ်တွေကို ဖန်တီးပေးနိုင်အောင် ကျွန်မတို့တွေကြိုးစားရပါမယ်။ အဓိက,ကတော့ ကိုယ့် Brand ကို အသုံးပြုပြီး ဂုဏ်ယူနိုင်တဲ့အထိ Quality and Image ကို အကောင်းဆုံးတည်ဆောက်ပေးဖို့ပါ။
Revlon Cosmetics ကို ဖန်တီးခဲ့တဲ့ Charles Revson က “ In the factory, we make cosmetics; in the store, we sell hope. ” ဆိုပြီး Customers တွေရဲ့ Expectation နဲ့ Satisfaction ကို အလေးထားကြောင်းကို ဒီစာသားနဲ့ ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။